4.90 / 5 (kubva 1,632 mavhoti)
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Outlook Repair v8.6
Unogona kuisa zita refaira rePST zvakananga kana kudzvanya iyo
bhatani kuti uwane iyo PST faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
Kana iwe uchiziva iyo vhezheni vhezheni yeiyo sosi PST faira kuti igadziriswe, ipapo unogona kuzvitsanangura mubhokisi re combo
parutivi peiyo sosi faira edit bhokisi, zvinogona mafomati ari Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, Outlook 2013-2019 / Hofisi 365 PST faira uye Outlook 2013-2019 / Hofisi 365 OST faira. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", saka DataNumen Outlook Repair ichaongorora iyo sosi PST faira kuti uone mafomati ayo otomatiki. Nekudaro, izvi zvinotora imwe nguva.
Iwe unogona kusarudza fomati yeiyo yakagadziriswa PST faira mubhokisi re combo
padivi peiyo yakamisikidzwa faira edit bhokisi, zvinogona mafomati ari Outlook 97-2002 uye Outlook 2003-2019 / Hofisi 365. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", ipapo DataNumen Outlook Repair ichagadzira iyo PST faira inoenderana neAptlook yakaiswa pakomputa yemuno.
bhatani, uye DataNumen Outlook Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi PST faira. Kufambira mberi kubhawa